देस बनाऊन विदेशी बाद होईन, विदेशी पूजी र प्रबीधि प्रयोग गर्नु पर्छ::Pathivara News
मीन बहादुर पण्डित देस बनाऊन बिदेसी बाद होईन, बिदेसी पूजी र प्रबीधि चाहिंछ त्यो पनी नेपाली पूजी र प्रबीधि अपुग भएमा मात्र । देस विकास गर्ने सिद्धांतका लागी नेपाली माटो सुहाऊदो जनताको बहुदलीय जनबादमा उल्लेखित १५ बुदा नै काफ़ी छन । अनि सांतीका लागी बिश्वले मानेको नेपालमैं जन्मेका बुद्दले दिएको संदेस काफ़ी छ ।
अहिले सम्म बिदेसी बाद बोकर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन बाहेक अरु केहि पनी भएनन । आर्थिक परिवर्तन बिनाको राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘जबजबादी’ राख्नु पर्छ । माक्सबाद लेनिनबाद र मावोबाद भंदा जबजमा के कुराको कमी छ ? पार्टीको नामको पछाडी माक्सबाद लेनिनबाद र मावोबाद राख्न मिल्ने तर जनताको बहुदलीय जनबाद राख्न चाँही किन नमिल्ने ? नेपाल मैं स्तरीय समान बंछ भने धेरै नाफा खान विदेशी समान भित्राए जस्तो भएन र यो त ?
पार्टीलाई ठूलो देखाऊँन अन्तरास्टीय स्तरीय नाम होईन, अन्तरास्टीय स्तरको काम गर्नु पर्छ । अहिले चिनमा रास्टपती सी जिंग पींगको विचारलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले समीधान मैं सी जिंग पींग नीति (सी जिंग पींग विचारधारा) भनेर लेखदै छ । चिनिया बीसेसता सहितको समाजबाद लागु गर्ने दिसामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अगाडी बडदै छ ।
चीनीयाहरूले किन मावोबाद लेनिन बाद वा मावोबाद लेखेनन त ? बिदेसी बादले गर्दा चिन, कोरिया र जापनले प्रगति गरेका होईंनन । देस बनाऊन बीदेसी बाद होईन इमांदारीता, इच्छा सक़्ती र भिजन चाहिंछ । त्यो भिजन जबजमा पक्कै छ । पूजी, प्रबीधि र मेंन पावर त्यहि इच्छा सक्तीले ब्यावस्थापन गर्ने हो ।
अर्कों कुरा जबजले त कम्युनिस्टहरूलाई युद्दबाट सत्ता क़ब्ज़ा गर्ने नीति त्यागेर सांती पूर्ण राजनीतिक प्रतिसपर्दामा ल्याएको छ ।नत्र विदेशी बादले त युद्द बाट सत्ता क़ब्ज़ा गर्नु पर्छ भंछ । जबज नभएको भए युद्दबाट सत्ता क़ब्ज़ा गर्ने लड़ाई चली रहेको हुँथ्यो अनि क़यौको ज्यान गहीरहेको हुँथ्यो । त्यसो हुदा जबजले बिश्वसांतीमा महत्वपूर्ण योगदान पूर्याएको छ ।
त्यसैले जबजलाई त नोबेल सांती पुरस्कार दिदा पनी फरक पर्दैन । यत्रो गुण युक्त जबज नमानेर किन बिदेसी बाद मान्ने ? त्यसैले एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जबजबादि राखिनु पर्छ । किन भने नेपालमा महा-परूस र बिद्वानहरू जन्मी दैनन भनेर कत्तै पनी लेखिएको छैन ।
महा-परूस र बिद्वानहरू बिश्वको कुनै पनी कुनामा जन्मीन सक्दछन ।फेरी मास्क्स बाद र लेनिन बादको परिष्कृत रूप जबज हो भंदा फरक नपर्ला । यो नै मदन भण्डारीको सपना पुरा गर्ने माध्यम हो, यो नै मदन भण्डारी प्रतिको सच्चा सम्मान हो । एदि यसो गर्न सकीयो भने मात्र कम्युनिस्टहरूले देशमा जनताले खोजे जस्तो परिवर्तन ल्याऊन सक्ने छन ।
नाम अनुसारको काम नगरे त्यस्तो नामको कुनै अर्थ रहन्न । सर्ब साधारण जनतालाई विदेशी बादको व्याख्या सुनाएर के काम ? उनिहरुलाई त बादको होईन भातको चिंता हुंछ । बिदेशी बादको ज्ञान हुनेले मात्र देस बनाऊन सक्छ भन्ने कुरा साँचो होईन, र बिदेसी बाद नबुझेकाले देश बनाऊन सकदैनन भन्ने कुरा पनी सही होईन ।
त्यशैले विदेशी बादको ज्ञान भएको नेता होईन देश बनाउने ज्ञान भएको नेता र पार्टी चाहिंछ । त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्न तीर अब बन्ने नया एकीकृत पार्टी लाग्नु पर्ने देखींछ । त्यसैले जनताको बहुदलीय जनबाद ज़िन्दाबाद !